साझा यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ, अबदेखि पैसा चाँहिदैन ! | Dainik Sanjal
Home विज्ञान/प्रविधि साझा यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ, अबदेखि पैसा चाँहिदैन !
साझा यातायात चढ्दै हुनुहुन्छ, अबदेखि पैसा चाँहिदैन !
नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको सहकार्यमा साझा यातायातले ‘इटिकेटिङ’ शुरु गर्न तयारी थालेको छ । इटिकेटिङ शुरु भएपछि यात्रुले भाडामा पैसाको साटो कार्डको प्रयोग गर्न सक्ने छन् । साझाका सबै बसमा उक्त सुविधा हुनेछ । इटिकेटिङले विशेष गरी कर्मचारी, विद्यार्थीलगायतलाई सजिलो हुने संस्थाले जनाएको छ ।
साझा यातायातले दुई वर्ष पहिले नै नेपाल बैंक लिमिटेड र नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरेको थियो । गत वर्ष परीक्षणका रुपमा केही बसमा लागू भएको थियो ।
डोल्पा, ११ फागुनः नेपालगञ्ज विमानस्थलदेखि कर्णालीका सम्पूर्ण जिल्लामा उडान गर्ने विभिन्न एअरलाइन्सको सहुलियत टिकट वितरणको जिम्मा नेपाल एअरलाइन्स आफैँले लिने भएको छ ।
वर्षौंदेखि कर्णालीको सहुलियत टिकटमा हुने दुरुपयोग रोक्न एअरलाइन्सलाई नै वितरण गर्न निर्देशन दिइएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नेपालगञ्जका प्रमुख प्रतावबाबु तिवारीले बताउनुभयो ।
योभन्दा अगाडि सम्बन्धित जिल्लाका मान्छेद्वारा गठन गरिएको सेवा समाजलाई सहुलियत टिकट वितरणको जिम्मा दिंदा दुरुपयोग भएको उहाँले बताउनुभयो । निजी विमान कम्पनीलाई बिरामी, अशक्त, अपांग र विद्यार्थीलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर टिकट वितरण गर्नसमेत नागरिक प्राधिकरणले जारी गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।
कर्णालीमा तारा, गोमा र सीता एअरलाइन्सले हप्तामा एउटा सहुलियत उडान गर्दै आएका छन् भने नेपाल एअरलाइन्सले भने हप्तामा दुईवटा सहुलियत उडान गर्दै आएको छ । प्रायः निजी विमान कम्पनीले चार्टर उडानलाई प्राथमिकतामा राखेर सहुलियत उडानमा ढिलाइ गर्ने गरेकाले हप्तामा एउटा मात्र गरिने सहुलियत उडानलाई प्राथमिकतामा राखेर उडान गर्न निजी विमान कम्पनीलाई आग्रहसमेत गरिएकोे छ । नेपालगञ्जदेखि हुने चार्टर उडानमा दुईतर्फी भाडा लाग्ने गर्दछ भने सहुलियत उडानमा एकतर्फी भाडा मात्रै लाग्ने गर्दछ । रासस
कोठामै यौन धन्दा गर्छन अनी एक रातको पचास हजार लिन्छिन कक्षा १० मा पढ्ने युवतीले..(पुरा पढ्नुहोस)6views
एयर होस्टेसको सेक्स डायरी पतिको हातमा परेपछि…मच्चियो बबाल5views
महिलाहरूलाई पुरुष मिलनको रहर कुन बेला अधिक हुन्छ ?4views
भारतीय पुरषसँग नेपाली महिला रंगे हात पक्राउ4views
उमेर पुगेकाले मात्र हेर्नुहोला । युवतीको सेक्सी जवानी भिडियोमा पोख्दा युवाहरु पानी पानी – (हेर्नुहोस भिडियो )4views
जीवनभर कमाएको पैसाले घरजग्गा किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? किन्नु अगाडी यी ४ कुरा जान्नुहोस अन्यथा पछुताउनु पर्ला4views
नेपाली टोपीको इतिहास (एक पटक अवस्य पढ्नुहोला )3views